Mawiricheya Ari Kuve Chikamu cheSosaiti Yedu
vamwe mavhiripu vane mota asi mazhinji anofambiswa nemushandisi. mavhiripu inogona kupa rusununguko runogona kuchinja hupenyu.
Ruzhinji rwevanhu vanofanirwa kushandisa wiricheya vanotambura neimwe mhando ye kuremara, izvo zvinowanzoitika nekuda kwetsaona kana chirwere. Asi mavhiripu yakabatsira vakawanda remara vanhu vanowana zvakare kumwe kuzvimirira kwavo uye kufamba.
Vanogona kuita zviitiko zvakawanda sekuenda kunotenga, kuenda kubasa, uye kunyange kutamba mitambo. Vanhu vazhinji vane mukurumbira vanogona vachiri kunakidzwa nebasa rinopa mubayiro vachiri mu wiricheya.
wiricheya Kuwanika Kunokura Kwakasimba
Nzanga yanhasi yagadzirisa zvakawanda kuti igare wiricheya vashandisi nekugadzira nzvimbo dzeveruzhinji nezvivakwa zvakanyanya kufambidzana. Nzvimbo zhinji dzeveruzhinji dzinotopa wiricheya rendi kune avo vasingakwanise kufamba nzendo refu kana pamwe kwete zvachose.
Vanhu vakaremara vanogona kushandisa izvi mavhiripu kana kunyange kufamba scooter kuenda kunotenga zviri nyore uye nyaradzo. Zvakare, mazhinji mafambiro ekufambisa iye zvino anogarisa mavhiripu nemasuo akapamhama anotendera nyore kupinda uye kubuda. Izvi zvinoita kuti kutenderera guta kuve nyore kwazvo kune iyo wiricheya mushandisi.
wiricheya vashandisi vanozvinyatso kuzvivhiringidza kazhinji vanogadzira simba repamusoro remuviri nekungozvisundira zuva nezuva. Asi, vamwe wiricheya vashandisi senge quadriplegics havakwanise kushandisa maoko avo.
Vamwe vashandisi havana munhu anovaperekedza maawa makumi maviri nemana uye ndipo panotyaira mota mavhiripu inogona kuuya inobatsira zvikuru. Izvi mavhiripu anowanzo kuzivikanwa nemufaro wemufaro uri panzvimbo yechigaro chemagetsi wiricheya.
Chaicho Simba wiricheya
mavhiripu inogonawo kudzorwa nedzimwe nzira sekuraira kwezwi kana kufamba kwemusoro izvo zvakanakira vashandisi vane kushoma kwazvo kudzora maoko avo.
Kunyangwe aya mamodheru ari mashoma uye anodhura kwazvo, pane maitiro mu wiricheya musika kuve nemacheya ane masimba ari nani uye akachengeteka, izvo zvinowedzera kuzvimiririra kune zvakawanda remara vanhu vangangoda rumwe rubatsiro rwakawedzerwa.
Izvo zvakanaka kuona kuti kufambira mberi kwetekinoroji uye kuziva kwakawanda munharaunda kwaungana pamwechete kubatsira avo vakaremara kunakidzwa nemikana yese uye nerusununguko izvo zvinokwanisa vanhu vane hutano parizvino. Iwe unogona kuita chikamu chako kana iwe uri kunze uye nezve nekubatsira mumwe munhu ane kuremara izvo zvingangoda kubatsirwa kwenguva pfupi.